Puntland oo agabyo waxbarasho oo asaasi iyo KMG ah u dirtay dugsiyo waxyeeloobay (dhegeyso) – Radio Daljir
Puntland oo agabyo waxbarasho oo asaasi iyo KMG ah u dirtay dugsiyo waxyeeloobay (dhegeyso)
Nofeembar 23, 2013 4:05 b 0
Garoowe, November 23, 2013 – Dowladda Puntland ayaa adeegyo waxbarasho iyo qalab kala duwan u dirtay iskuulo dhowr ah oo ku yaala gobollada Nugaal, Bari iyo karkaar? oo ah meelihii ay masiibadu ka dhacday ee Puntland.
Agaasimaha waaxda mashaariicda iyo farsamada ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Cali faarax ayaa sheegay in ay xubno kala duwan u direen saddexda gobol ee ka tirsan Puntland, kuwaas oo qiimayn ku samayn doona adeegyadii waxbarasho ee ?ay roobabku saamyeen.
Maxamed Cali waxaa uu xusay in ay sidoo kale direen qalab waxbarasho iyo agabyo dhowr ah oo loo baahan yahay si ay u soo kabtaan dugsiyada waxbarasho ee meelihii roobabku ka da?een, qalabka waxaa ku jira Teendhooyin KMG ah oo dugsiyada qaar la siinayo.
Wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdi faarax Juxa ayaa arrintaan ku tilmaamay wax la gaarid, balse wasaaradda ayaa qiimayn balaaran ku samayn doonta adeegyada waxbarashadu ee meelaha duufaantu ka dhacay iyo iskuulada sida wax u gaareen, iyadoo markaas kadib loo qalab qaadan doono hir-gelinta baahida jirta.
Roobabkii qabowga iyo dabaylaha watay ee ka da?ay gobollada Puntland bartamihii bishaan, waxay saamayn ku reebeen dhamaan adeegyada asaasiga ee nolosha dadka, waxaa qayb ka ah waxyaabaha ay raadka ku reebeen adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada.
Dhegeyso: Zubayr habiil siciid oo daljir ka tirsan ayaa diyaariyey war-bixin arrintaas la xiriirta